Maamulka Puntland kan Somaliland ayaa Food is daray maanta | maakhir.com
Maamulka Puntland kan Somaliland ayaa Food is daray maanta
February 13, 2008 in Oromia
Laas-caanood:-Wararka naga soo gaadhaya magaalada Laas-caanood ee Xarunta Gobolka Sool ayaa sheegaya inuu maanta halkaasi dagaal ku dhex maray Ciidamada Somaliland iyo kuwa Maamulka Goboleedka Puntland,waxa la soo sheegayaa inuu Dagaalkaasi socoday mudo gaaban,walaw aan la sheegin khasaaraha iska hor imaadkaasi ka dhashay.
Ila war gal ah yaa sheegaya inay isku dhaceen Laba Sahan oo ka kala tirsan Maamulada halkaasi isku hor fadhiya, warka ayaa sheegaya inay Rasaas xoogaan mudo is waydaarsanayeen Labadaasi Garab.
Maamulka Puntland oo dhankiisa ka hadalay dagaalkaasi maanta dhacay ayaa sheegay inuu dhankooda waxa khasaare ah soo gaadhan, balse ay jiraan inay dhar baaxo xoogan ku dhufteen Maamulka Somaliland oo ay sheegeen inay ciidamadoodu weerarka markii hore soo qaadeen.
Taliyaha Ciidanka Sirdoonka Puntland ee Gobolka Sool Max’ud Max’ed Cabdi ka hadlay Dagaalkaasi maanta dhacay ayaa sheegay inay ciidamada Somaliland weerar Gaadma ah ay ka soo qaadeen Kuwa Puntland iyaguna ay ugu jawaab celiyeen mid kaasi ka sii xoog badan waa sida uu Hadalka u dhigaye.
Masuulkaasi Puntland u hadalay waxa uu tibaaxay in ciidamada Puntland ee halkaasi joogaa ay maanta horay ugu sii Ruqaansadeen dhanka Magaalada Laas-caanood isaga oo waliba aad ugu nuux- nuuxsaday inay maalin dhaw ka talin doonaan Magaalada Laas-caanood ee Xarunta Gobolka Sool.
Wararkale oo dheeraad ah oo naga soo gaadhaya magaalada Garoowe ee xarunta Puntland ayaa daaha ka qaaday inay jiraan Abaabul kii ugu xoog badnaa iyada oo aad wadooyinka ku arkayso Gaadiidka Dagaalka ee Gaashaaman kuwaasi oo Boqoolay Jiidaha here ee ay isku hor fadhiyaan Ciidamada kala taageersan Maamulka Puntland iyo kan Gooni isu taaga ah ee Somaliland.
Gobolka Sool ayaa ilaa mudo laba bilood ah waxa ay ka maqnayd Gacanta Maamulka Puntland iyada oo ay kala wareegeen wakhtigaasi Maamulka Somaliland oo dagaal ay halkaasi fooda isku dareen.
« Dagaal ka dhacay Degaanka Ayl ee Gobolka Nugaal
Ninkii Ajaanibka ahaa ee Duleedka Ceerigaabo Lagu haystay ayaa maanta la soo samata bixiyay »